Nei Jesu ari nemadzitateguru mumadzinza maviri?
churchages.net » Shona » Zvidzidzo zveBhaibheri » Nei Jesu ari nemadzitateguru mumadzinza maviri?
Nei Jesu ari nemadzitateguru mumadzinza maviri?
Bhuku raMateo rinoronda dzinza raJesu kubva kuna Abrahama kuenda kuna Davidi kuenda kuna Soromoni kuenda kuna Jekonia kuenda kuna Josefa.
“Kubereka” zvinoreva kuti kuzvara mwana.
Izvi hazvina kutaurwa pamusoro paJesu, sezvo Josefa aive asiri baba vake vekubereka.
MATEO 1:1 Mazita emadzitateguru aJesu Kristu, mwanakomana waDavidi, mwanakomana waAbrahama.
2 Abrahama akabereka Isaka; ...
6 Jese akabereka mambo Davidi, Davidi akabereka Soromoni kumukadzi waUria, ...
11 Josia akabereka Jekonia navanun'una vake nenguva yokutapwa kwavo kuBabironi.
16 Jacobo akabereka Josefa murume waMaria, iye akabereka Jesu unonzi Kristu.
Davidi akataurwa Abrahama asati ataurwa sezvo aive iye mambo weIsraeri ane mbiri.
Abrahama akataurwa nekuti akakunda madzimambo emazuva ake (zvichiburitsa pachena kuti aive mukuru kupinda ivo) asi achibva azviwisira kuna Merkisedeki aivewo mambo.
Merkisedeki uyu aimbova ani?
VAHEBERU 7:1 Nokuti Merkisedeki uyo mambo weSaremi, muprista waMwari wokumusoro-soro, wakasongana naAbrahama pakudzoka kwake andovuraya madzimambo, akamuropafadza;
2 Abrahama akamupa vo chegumi chezvose; Iye pakutanga ari Mambo wokururama, kana zvichishandurwa, vuye zve, mambo weSaremi, ndokuti Mambo worugare.
3 Asinababa, asinamai, asinamadzisekuru, asina kutanga kwemazuva, kana kuguma kwovupenyu, asi wakafananidzwa noMwanakomana waMwari, unogara ari muprista nokusingaperi.
“Asinababa, asinamai”. Nemamwe mazwi aive asina kuberekwa nevanhu.
“Asina kutanga kwemazuva, kana kuguma kwevupenyu”; Izvi zvinoreva kuti haana kubvira aberekwa. Haana kubvira afa.
Saka Merkisedeki anofanira kuva aive Mwari. Mwari akatora ivhu akazviitira muviri wemunhu waakararama ari mauri paaishanda naAbrahama.
Saka apa ndipo panotangira Mateo paanodaidza Kristu kuti Mambo. Merkisedeki aive Mambo chaiye uye akashanda naAbrahama chete, kwete nemadzimambo emazuva iwayo.
Mateo Chaputa 1 inoenderera mberi nedzinza reropa rimwechete kusvika pana Davidi, mambo wemaJuda aive nembiri kukunda vese.
Akabva abva akaenda pana Soromoni akatevera David saMambo. Saka hakuna anokwanisa kuva mambo wemaJuda asiri wedzinza raSoromoni.
Dzinza rehumambo rakaenderera mberi kusvika kuna Jekonia. Jekonias (Jeconias) izita rechiGiriki. Jekonia (Jeconiah) izita muchiHeberu.
Uyu “ah” anobva pana “Yah” kunova kudunhurira Yahweh, zita raMwari muchiHeberu rakagadziriswa.
Zita raMwari chairo muTestamente Yekare raive riri risingadaidzike YHWH.
Uyu “a” na “e” vakawedzerwa nevanhu kuti Zita iri ridaidzike.
Fananidzai izvi naHerija rinova zita muchiHeberu, rinodaidzwa kuti Eria muchiGiriki.
Asi Conia (zvichireva kugadzwa) ainzi Jeconiah (akagadza naJehova) akatukwa naMwari kuti hakuna wedzinza rake aibva kwaari aizova mambo zvakare.
Jehova kuturikirwa kwezita rekuti Yahweh.
MuTestamente Yekare Mwari aizviratidza seMweya. Hatikwanisa kutsanangura Mweya watisingaoni. Saka Mwari vakatora Zita raizoratidza masimba ake nechinhu chikuru chekuti aive Mwari.
Mazita aya akabva aguma kuTestamente Itsva apo Mwari Baba (Mweya usingaonekwe) wakapfeka muviri wemunhu (Mwanakomana waMwari) akamupa Zita remunhu, Jesu Kristu.
Tinokwanisa kunzwisisa humunhu hwaMwari (Mwanakomana waMwari) kunyangwe tisingakwanisi kunzwisisa Baba vasingaonekwe vanorarama muna Kristu. Asi parizvino tave nezita raMwari remunhu. Zvakadaro Zita reTestamente Yekare reMweya waMwari (Adonai, Yahweh, Jehova, YHWH nemamwewo) akatsiviwa neZita rake reMunhu, Jesu Kristu.
Zita rekuti Jehova raionekwa kakawanda muTestamente Yekare asi kwete muTestamente Itsva.
JEREMIA 22:28 Ko munhu uyu Konia mudziyo wakaputsika unozvidzwa here? Iye mudziyo usingafadzi munhu here? Wakadzingirweiko iye navana vake, vakadzingirwa kunyika yavasingazivi?
30 Zvanzi naJEHOVA, Nyora kuti munhu uyu haana vana, munhu usingazofari pamazuva ake; nokuti hakuchinomurume pakati pavana vake achava nomufaro, uchagara pachigaro chovushe chaDavidi, achibata vushe bwaJuda.
Saka Josefa akabva kunaKonia (kana kuti Jekoniah kana Jekonias) haakwanisi kuva mambo. Asi vana vanobva nepanaSoromoni vanokwanisa kuva mambo. Hakuna rimwe dzinza rehumambo. Asi dzinza iri raive ragurwa parakasvika panaKonia “aka”Jekonia. (“AKA” zvinoreva kuti AnoziviKanwA zve nekunzi.)
Kugadzirisa dambudziko iri, Ruka akatora vana vakabva pana Davidi kupfurikidza mwanakomana wake mukuru Nathan. Dzinza iri harikwanisi kuita mambo asi rakasununguka kubva pakutukwa kwaKonia. Dzinza iri rakabereka Maria. Kristu Mwanakomana wake, kwete waJosefa. Josefa akava baba vaJesu vekurera. Mwana wekurera anokwanisa kugara nhaka yemwana wekubereka. Saka kupfurikidza Josefa, Jesu anokwanisa kuita mambo wemaJuda. Asi nekuda kwekusava mwanakomana waJosefa wekubereka, akasunungurwa kubva pakutuka kwaKonia.
Izvi zvinopa Jesu chinzvimbo chakanaka chekuva Munhu mumwechete chete anokwanisa kuva mambo wemaJuda.
Ropa riri pamadzinza ekuna Mateo naRuka rimwechete pakati paAbrahama naDavidi. Tarirai kuti Ruka akatsanangura sei dzinza revanhu ava. Haana kutaura achiti “akabereka” sezvo izvi zvichireva mwana wawakazvara chaiye. Akati “mwanakomana wa” zvinova nekureva kuviri. Zvinogona kureva kuti mwanakomana kana kuti mukuwasha. Mazita ese akataurwa vaive vana vekubereka kunze kwaJosefa. Aive mukuwasha wababa vaMaria. Zvaimuita kuti ave mwanakomana wababa vaMaria. Mukuwasha wese anofanira kujaira kudaidza vatezvara vake kuti “Baba”. Asi zvakadaro, izvi zvinoda kuti munhu adzidze ajaire. Asi Ruka, achinyora muchiGiriki, akava nedambudziko rekuti muchiGiriki hamuna izwi rinoreva kuti mukuwasha.
RUKA 3:23 Zvino iye Jesu wakanga anamakore anenge makumi matatu, nguva yaakatanga kudzidzisa, ari, pakufunga kwavanhu, mwanakomana waJosefa, mwanakomana waHeri,
(Heri aive baba vaMaria. Josefa aive mwanakomana wake nekuda kwekuroorana kwaakaita naMaria).
24 Mwanakomana waMatati, mwanakomana waRevi, mwanakomana waMerki, mwanakomana waJonai, mwanakomana waJosefa,
31 Mwanakomana waMerea, mwanakomana waMena, mwanakomana waMatata mwanakomana waNatamu, mwanakomana waDavidi,
38 Mwanakomana waEnosi, mwanakomana waSeti, mwanakomana waAdamu, mwana waMwari
Mateo akatsanangura Jesu saMambo wemaJuda. Shumba yerudzi rwJuda. Mambo anofanira kubva mudzinza rehumambo ramambo Davidi.
Marko akatsanangura Jesu senzombe, muranda anotambudzika achitakura mitoro yedu. Hapana kunzi panodiwa munhu weropa kuti ave muranda mudzinza.
Ruka anotsanangura Jesu seMunhu. Saka akatanga naAdamu, munhu akarurama wekutanga, akazokanganisa mubindu reEdeni. Zvino Jesu, saAdamu wekupedzisira, munhu akarurama wekupedzisira, aifanira kugadzirisa kutadza kwaAdamu mumunda weGetsimani nepaCalvari neRopa rake.
Mwari akatuka nyika nekuda kwaAdamu.
GENESISI 3:17 Kumunhu akati, Zvawakateerera izwi remukadzi wako, ukadya muti wandakakuraira ndichiti, Usadya, zvino nyika yatukwa nemhosva yako, uchadya zvibereko zvayo nokutambudzika mazuva ose oupenyu hwako;
18 Ichakuberekera minzwa norukato, iwe uchadya miriwo yomusango;
19 Uchadya zvokudya zvako neziya rechiso chako kusvikira wadzokera kuvhu; nokuti wakatorwa kwariri. Zvauri guruva uchadzokerazve kuguruva.
Jesu akadikitira ropa muGetsimani vakamupfekedza korona yeminzwa mumusoro make pavaimugadzira kuti aturikwe pamuchinjikwa. Saka zvese minzwa nedikita zvakasangana neRopa raJesu. Saka kutukwa kweminzwa nedikita kuchabviswa rimwe remazuva.
Asi Ruka ane mazera 13 kukunda akataurwa kuna Mateo. Nei Mateo akasiya asina kumataura?
Konia akachekwa kubva padzinza rehumambo naMwari, nekuda kwekumukira kwaakaita Mwari. Kusimbisa kuchekwa uku, Mateo akacheka madzimambo 13 kubva pamutsetse wake nekuti 13 chiverengo chekumukira.
Iyi iyambiro huru kwatiri. Kana tikamukira Bhaibheri raMwari, anoticheka otibvisa muBhuku yeHupenyu.
GENESISI 14:4 Vakanga vava varanda vaKedori-raomeri, makore ane gumi namaviri, vakamumukira negore regumi namatatu.
Aya ndiwo madzimambo vakarwisana Abrahama akakunda vaive vambokunda.
Mateo ari kutiyambira kuti tisamukire Mwari.
Zvakazarurwa Chaputa 13 ndiyo nzvimbo apo zvikara zvikuru zviviri (masimba) akamuka achimukira Mwari kuti zviite kuti nyika itore chiratidzo chechikara. Pahuma dzedu pane pfungwa dzinotigonesa kuti tifunge. Zvikara zviviri izvi zvichasuka pfungwa dzevanhu munyika kusvikira vasisateveri Bhaibheri nemazvo.
Chikara chekutanga ndiko kusimuka kwekereke yeRoman Catholic kuti itange kuita kwesangano kusimo muMagwaro kunoita kuti vanhu vateerere mirairo yevanhu. Kuita kweMasangano kunobva chidimbu muMagwaro chidimbu mumazano evanhu uye tsika dzavo. Asi chakabudirira kukurudzira vanhu vanodarika biriyoni kuti vachitevere.
Chikara chechipiri, America, inosimuka senyika yakasimba inoshandisa simba rayo munezvemari nebudiriro munezvesainzi kuti itungamirire veMasangano akabuda muCatholic nevamwe vasiri maCatholic kuti vave mune kumwe kuita kwemasangano kunova mufananidzo weCatholic yapararira pai rese nesimba rakakurisa kunova “chichechi-chechi” (churchianity) chinova chikamu Magwaro chikamu hachina Magwaro.
Mateo akabvisa madzitateguru 13 kubva padzinza rehumambo uye ane zvikwata zvitatu zvine mazera 14.
Uyu mutambo pamazwi. MuchiHeburu hamuna ma a e iou. Saka Davidi anopereterwa achinzi Dvd. MuchiHeberu, mamwe mavara anokwanisa kuva achimiririra chiverengo. D anomiririra chiverengo 4 . “V” anomiririra chiverengo 6.
Saka DVD rinobatanidzwa sezvinotevera 4+6+4 =14
Saka Mateo akashandisa zvikwata zvitatu zvemazera 14 kuti asimbise chiverengo 14.
Ichi chiverengo chinofambidzana nezita raDavidi.
Saka Davidi ndiye mambo anopa kukosha kudzinza iri. Madzimambo havasi vanhu vanokosha pachavo, vanowana kukosha kwavo nekuva vanakomana vaDavidi. “Mwanakomana” anokwanisa kureva mwana wako wekubereka kana muzukuru anozouya achibva kuvana vakabva kwauru.
Asi dzinza iri rakatanga naAbrahama akazvipa kuna Mambo Merkisedeki (Mwari mumuviri wemunhu waakazvisikira kubva kuguruva akaushandisa kwekanguvana asati aparadza muviri uyu paaive asisina basa nawo).
Saka Abrahama akawana kukosha kwake nekuva nekutenda muna Mwari. Dzinza iri rakabva raperera pana Jesu paakatorwa naJosefa kuita Mwanakomana wake wekurera.
Jesu anodaidzwawo kuti Mwanakomana waDavidi.
Asi Jesu mukuru kupinda Davidi sezvo Jesu haasingori Mambo wemaJuda, asi achaonekwa ari mambo wepasi rese nekukasika. Saka Davidi akawana kukosha kwake nekuva ari mudzinza raizobuda Jesu.
Evangeri remaBhuku mana ndiro moyo weBhaibheri. Anobatanidza Testamente Yekare neTestamente Itsva pamwechete.
Moyo une tsinga mbiri dzinotendera ropa kupinda mumoyo. Tsinga imwechete inopinda mukamuri yekutanga. Ropa rinobva rapinda mukamuri yechipiri kubva imomo rinobva rabuda richipinda mumapapu. Zvino ropa, rakazara nemweya unopa upenyu weokisijeni, rinobva radzokera mukamuri yechitatu richibva imomo rinopinda mukamuri yechina ine simba kwazvo ndiyo inobva yaendesa ropa kuti ritenderere mumuviri wese.
Saka Mateo Chaputa 1 inotaura madzitateguru aJesu seMwanakomana waDavidi, Mambo. Ropa rinobva mudzinza rehumambo iri rinomiririra ropa rinobva mumuviri richipinda mukamuri yemoyo yekutanga. Zvino Ruka Chaputa 3 inodzokera kuna Adamu, mwanakomana waMwari, kuratidza kuti Jesu akapinda murudzi rwevanhu seMweya waMwari unopa upenyu. (zvichimiririrwa nekamuri yechitatu pamoyo).
MATEO 9:27 Zvino Jesu wakati achibvapo mapofu matatu akamutevera, akadanidzira achiti: Mwanakomana waDavidi tinzwireiwo ngoni!
MARKO 10:45 Nokuti Mwanakomana wemunhu naiye haana-kuuya kuzoshumirwa, asi kushumira, nokupa vupenyu bwake ruve rudzikinuro rwavazhinji.
Moyo une makamuri mana anosuka nekupa Ropa rakachena rinopa hupenyu mumuviri.
Evangeri remaBhuku mana rinotsanangura kuti Hupenyu Husingaperi hwakaitwa sei nekudeuka kwakaita Ropa raJesu paCalvari.
Kamuri yega-yega inomiririra chikamu chakasiyana chekuitika kwekuitwa kweropa.
Evangeri reBhuku rega-rega rinomiririra hushumiri hwakasiyana hwakaitwa naJesu kuti akunde kuti tiponeswe.
Mateo anomuratidza ari Mambo. Marko anomuratidza ari muranda, akauya kuzotibatira. Basa rake raive rekufira zvivi zvedu.
Izvi hazvisi zvinhu zvinojairika. Madzimambo anoda kutonga, havadi kushanda.
Ruka anomuratidza ari Munhu akarurama. Johane anoratidza kuti aive Mwari pamuviri, Emanuere.
Izvi hazvigoneke kuti vanhu vakawanda vazvinzwisise. Kuti Munhu maari ndimo munogara kuzara kweMweya waMwari pamuviri.
JOHANE 4:24 Mwari ndiMweya, vanomunamata vanofanira kumunamata mumweya nezvokwadi.
Pahushumiri uhu hutatu hwacho hunokwanisa kumiririrwa nemhuka.
Mambo vezvikara ishumba. Jesu ndiye Shumba yerudzi rwaJuda.
Nzombe ndiyo mhuka yakasimbisisa pazvipuka zvizhinji inotibatira mabasa nekutakura mitoro yedu inorema.
Munhu akarurama ndiye Munhu, Jesu, watinofanira kutsungirira kutevera tese.
Gondo rine maziso anoona zvinoshamisa uye rinobhururuka kuenda mudenga-denga, rinokwanisa kuona zviri kure, kure kukunda zvatinokwanisa kuita isu.
Jesu seGondo guru, anokwanisa kuona ramangwana redu.
Mufananidzo uyu unotaridzika sechiratidzo chaMwari chakaonekwa naJohane kuDenga.
ZVAKAZARURWA 4:2 Pakarepo ndakava mumweya; tarirai chigaro chovushe chakagadzwa kudenga, nomumwe agere pachigaro.
6 Pamberi pechigaro chovushe pakanga panegungwa rakaonekera, rakafanana nekristaro; napakati pechigaro chovushe, napamativi ose echigaro chovushe, pakanga pane zvisikwa zvina zvipenyu, zvizere nameso mberi neshure kwazvo.
7 Chisikwa chipenyu chokutanga chakanga chakafanana neshumba, chisikwa chipenyu chechipiri chakanga chakafanana nemhuru, chisikwa chipenyu chechitatu chakanga chinechiso chakaita sechomunhu, nechisikwa chipenyu chechina chakanga chakafanana negondo rinobhururuka.
Ezekieri akaona chiratidzo chakafanana neichi zvakare.
EZEKIERI 1:10 Kana zviri zviso zvazvo pakuonekwa kwazvo, zvaive nechiso chomunhu; zvose zviri zvina zvaive nechiso cheshumba kurutivi rworudyi; zvose zviri zvina zvaive nechiso chenzombe kurutivi rworuboshwe; zvose zviri zvina zvaive nechiso chegondo.
Mhuru yaive nzombe duku yaizokura.
Kana chigaro chaMwari chevushe chichiratidzika seizvi Kudenga, zvino chigaro chake chevushe panyika chiripi?
Akambogara muTemberi kuJerusarema, yaidaidzwa kuti Nzvimbo Tsvene nekuti Mwari aigara imomo.
Mwari akabvarura chidzitiro paNzvimbo tsvene akabva abuda muTemberi pakafa Jesu paCalvari. Temberi yakaparadzwa nemukuru wemauto eRoma Titus, aive mwanakomana wamambo weRoma Vespasian muna 60 AD.
Saka hakuchina Nzvimbo Tsvene panyika yekuti Mwari vagaremo.
Saka Mwari vanogarepi zvino?
Kune maBhuku mana eEvangeri. Ese anotitaurira pamusoro pemuchinjikwa paCalvari.
Chiverengo 4 chinokwanisa kuvakwa kutenderedza muchinjikwa.
Zvino mapeto mana emuchinjikwa anokwanisa kubatanidzwa nemufananidzo wemoyo.
Kana makamuri mana emoyo achimiririra varindi vana vechigaro chevushe, zvino Jesu aizogara pakati pemoyo yedu isu vanhu.
Mwari haachararame panyika munzvimbo tsvene.
Mwari ave kugara mumoyo yevanhu vatsvene.
Munhu mutsvene mumwe nemumwe idombo rinorarama rinova chikamu cheTemberi yaMwari yemweya yaari kuvaka.
ZVAKAZARURWA 4:4 Kwakanga kunezvigaro zvovushe zvinamakumi maviri nezvina zvakanga zvakakomberedza chigaro chovushe; napazvigaro pakanga pagere Vakuru vanamakumi maviri navana, vakapfeka nguvo chena; vakanga vanekorona dzendarama pamisoro yavo.
Kuchengetedza moyo wedu tine mbabvu 24 dzinomiririra Vakuru makumi maviri nevana vakagara vakapoteredza chigaro chevushe.
Vakuru makumi maviri nevana ava ndivanani?
Madzitateguru gumi nevaviri kubva kuTestamente Yekare vakapa mazita avo kumarudzi gumi nemaviri aJuda.
MaPositora gumi nemaviri kubva kuTestamente Itsva vakaita nheyo dzekereke.
Mutauro wechiGiriki unemavara makumi maviri nemana paarufabheti yavo.
Mazwi emaGiriki ese anoitwa kubva pamavara makumi maviri nemana aya.
Jesu ndiye Shoko.
Vakuru vanomiririra mavara earufabheti yaanozviratidza nayo, kwese kuTestamente Yekare neTestamente Itsva.
Saka Jesu anogara mumoyo yedu nekutenda, akapoteredzwa nemakamuri mana nembabvu makumi maviri neina.
Mwari akabva Munzvimbo Tsvene maaigara panyika muTestamente Yekare nepazuva rePentecosti akaburuka kuzogara mumoyo mitsvene yevadzidzi vake vaive muimba yepamusoro.
Mumoyo memunhu ndimo makasarudzwa naMwari kuti agare panyika.
Akamirira kukokwa nesu kuti apinde munoyo yedu.
Munomutendera kuti apinde, nekuda kwekusarudza kwenyu.
Kutendeuka kuita kunovhura masuwo emoyo yedu kutambira Jesu.